Sideeda Daafac Ee Ka Goolasha Badan Sergio Ramos Taariikhda Kubada Cagta - Labo Ka Mid Ah Man United Ayay U Soo Ciyaareen | Laacib.net
Sideeda Daafac Ee Ka Goolasha Badan Sergio Ramos Taariikhda Kubada Cagta – Labo Ka Mid Ah Man United Ayay U Soo Ciyaareen
November 5, 2019 Balaleti 3
Sergio Ramos waxa uu noqon lahaa gooldhaliye cajiib ah haddii uusan dooran laheyn booska uu haatan ka ciyaaro ee daafaca.
Kabtanka Real Madrid ayaa taariikhda ku geli doona mid ka mid ah daafacyadii ugu fiicnaa ee waqtigaan casriga ah, laakiin Romos waxa uu soo bandhigay cadeyn badan oo soo jeedineysa inuu noqon lahaa gooldhaliye fiican.
Kama hadleyno kaliya kubada koornada ee uu madaxa ku dhaliyo laakiin Ramos waxa uu ilgaar ah u leeyahay shabaqa sida xogta la hayo ay muujineyso.
Kaliya afar maalmood ka hor Rmaos waxa uu barbareeyay rikoodhka La Liga ee uu hayay Lionel Messi isagoo noqday xiddigii labaad ee 16 xilli ciyaareed oo isku xigta shabaqa soo taabta horyaalka ka dib rigooradii uu ka dhaliyay Leganes.
Waxa uu goolkaas sidoo kale ka dhignaa goolkiisii 110aad ee waayahiisa ciyaareed, waxaana uu 33 jirkaan kaalinta 9aad ka soo galay daafacyada ugu goolasha badan taariikhda kubada cagta.
Halkaan hoose ka eeg daafacyada kale ee ka goolasha badan Sergio Ramos.
8. Roberto Carlos – 113 goolal
Roberto Carlos waxaa lagu xusuustaa laadadkii xorta ahaa ee uu dhalin jiray, isagoo kaliya Real Madrid u dhaliyay 67 gool.
7. Paul Breitner – 113 goolal
Halyeeyga Jarmalka waxaa lagu xusuustaa inuu hal xilli ciyaareed 18 gool u dhaliyay kooxda Bayern Munich
6. Steve Bruce – 113 goolal
Daaficii hore ee Manchester United Steve Bruce haatana tababare isku bedelay ayaa il fiican u lahaa goolka. 19 gool ayuu dhaliyay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii 1990-91.
5. Graham Alexander – 130 goolal
Inkastoo uusan gool u dhalinin xulkiisa Scotland hadana waxa uu goolal ka dhaliyay heerarka kala duwan ee kubada cagta Ingariiska.
4. Laurent Blanc – 153 goolal
Blanc waxaa lagu xusuustaa inuu u soo ciyaaray Manchester United, laakiin sidoo kale ma ogtahay inuu yahay xiddiga ugu goolasha badan taariikhda kooxda Faransiiska ee Montpellier. Hada waa daafac isaga ayaana rikoodhka gooldhalinta ee kooxdaas weli haya.
3. Fernando Hierro – 163 goolal
Daaficii hore ee Real Madrid waa mid ka mid ah xiddigaha daafaca ee ugu goolasha badan taariikhda. 26 gool ayuu dhaliyay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii 1992-93.
2. Daniel Passarella – 175 goolal
Haddii aysan jiri laheyn Lionel Messi iyo Diego Maradona, Passarella ayaa noqon lahaa xiddiga reer Argentina ee ugu goolasha badan xulkiisa.
1. Ronald Koeman – 253 goolal
13 xilli ciyaareed ayuu Ronald Koeman dhalinayay in ka badan 10 gool xilli ciyaareedkii, laadad xor ah ayay u badnaayeen goolashiisa. Halka uu sida Fernando Hierro dhaliyay 26 gool hal xilli ciyaareed.
3 responses to “Sideeda Daafac Ee Ka Goolasha Badan Sergio Ramos Taariikhda Kubada Cagta – Labo Ka Mid Ah Man United Ayay U Soo Ciyaareen”
An idin saxa Ronaldo koeman midfield player ayaa ow ahay maha difaac toos ah
Koeman difaac ayuu ahay mudane anaga daawan jirnay barcana wuu u ciyaari jiray
mascherano ayaa ka goolal badnaa waxa aad sheegeysiin hal rigoore oo pique u salaxay ayuu dhaliyay yaa ka fiican hee